JIGJIGA: Khasaaraha Ay Geysteen Roobab Baraf & Dabaylo Watay Oo Maanta Ka Da'ay Iyo Muuqaalladii Dadka Ka Yaabiyey Ee Maanta - Jigjiga Online
Jigjiga (JigjigaOnline) – Roobab mahiigaan ah oo baraf iyo dabaylo watay ayaa ka daáy magaalada Jigjiga, kuwaas oo ay ka dhasheen daadad khasaare naf iyo maalba leh.
Inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku geeriyooday, tiro kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay intii uu daáyey roobku, laakiin waxa jira warar kale oo aan la xaqiijinin oo tibaaxaya in khasaaruhu intaa ka badan yahay.
Roobkan oo da’ayey saacad iyo badh ayaa waxa uu bilaabmay ka hor salaaddii casar, waxaana ka dhashay daad badan oo waxyeello u geystay guryo badan iyo jidadka magaalada, waxaana yaraaday isku socodka iyadoo ay go’doon galeen xaafadaha qaarkood.
Madaxweyne ku-xigeenka DDS Aadan Faarax iyo Mayorka magaalada Jigjiga Cabdifataax Ibraahim ayaa hoggaaminayey gurmad ay shacabka magaalada Jigjiga u sameeyeen dadka ay waxyeelladu kasoo gaadhay roobabkan, iyadoo ay khasaaraha sii badisay dabayl la socotay roobka oo burburiyey guryo ay dad danyar ah lahaayeen iyo xayndaabka guryo daaro ahba.
Dooxa weyn ee magaalada dhex-mara keenay biyo badan oo cabsi ku abuuray dadka deggan hareerihiisa, hase yeeshee lama sheegin wax khasaare ah oo uu sababay.
Roobkan ayaa inta la ogyahay noqonaya kii ugu horreeyey ee baraf intaas leég keena, sidoo kalena daadad iyo dabaylo ay wehelinayaan.
Halkan ka daawo sawirradii yaabka lahaa ee reer Jigjiga amakaagga ku riday:
Previous Itoobiya Oo Gudaha Dalkeeda Ku Qabatay Xubno Ka Tirsan Ururka Argagixisada Ee DAACISH
Next Maxaa Ka Jira In Madaxweynihii Hore Ee DDS Cabdi Iley Uu Ka Mid Yahay Maxaabiista Cafiska Lagu Sii Deynayo?